Akwụkwọ Ian Cleary na Martech Zone |
Edemede site na Ian Cleary kwuru
Inbound ahịa dị mma. Create mepụtara ọdịnaya. Drive na-ebugharị okporo ụzọ na ebe nrụọrụ weebụ gị. Na-agbanwe ụfọdụ okporo ụzọ ahụ ma ree ngwaahịa na ọrụ gị. Mana… Nke bụ eziokwu bụ na ọ na-esiri ike karịa ka ị nweta nsonaazụ peeji mbụ nke Google yana chụpụ ahịa okporo ụzọ. Marketingre ahịa ọdịnaya na-aghọ asọmpi obi ọjọọ. Organic ruru na mgbasa ozi mgbasa ozi na-aga n'ihu ịjụ. Y’oburu na gi onwe gi achoputaghi na ahia inbound ezughi ezu, i gha acho
Otu blọọgụ nwere ike ịbụ ezigbo isi iyi nke okporo ụzọ na weebụsaịtị gị, mana ọ na-ewe oge iji mepụta posts blog ma anyị anaghị enweta nsonaazụ anyị chọrọ. Mgbe ị na-eme blog, ịchọrọ ijide n'aka na ị ga-enweta uru kachasị na ya. N'isiokwu a, anyị akọwapụtala ngwa ọrụ 5 ga - enyere aka melite nsonaazụ gị site na ịde blọgụ, na - eduga n'ọtụtụ okporo ụzọ yana, n'ikpeazụ, ahịa. 1. Mepụta ihe oyiyi gị site na iji Canva Ihe oyiyi na-ese